प्रेम कथामा आधारित चलचित्र ‘जानी नजानी’ भोलीबाट रिलिज हुँदै, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
प्रेम कथामा आधारित चलचित्र ‘जानी नजानी’ भोलीबाट रिलिज हुँदै
काठमाडौं । कर्पोेरेट प्रेम कथामा आधारित चलचित्र ‘जानी नजानी’ शुक्रबार १ चैतबाट मुलुकका ७४ ओटा सिनेमा हलमा रिलिज हुने भएको छ। बितकर मनोज राठीका अनुसार मोफसलका ५२ ओटा र प्रस्तुतकर्ता रोशनी केसीका अनुसार काठमाडौंका २२ हलमा जानी नजानी रिलिज हुँदैछ।
‘मोफसलमा जानी नजानीले राम्रो हलहरु पाएको छ। तर काठमाडौंका वितकरले राम्रो हल मिलाई दिएनन्।’ प्रस्तुतकर्ता रोशनीले भनिन्,‘फिल्म राम्रो बनेको छ। अहिलेम्म हेरेका दर्शकले जानी नजानी मन पराउनु भएको छ र नेपाली फिल्ममा स्थापित प्रेम शैली भन्दा हामीले केही फरक दिएका छौं।’
यस अघि कलात्मक चलचित्र डाक्टर खाते निर्माण गरेकी रोशनीले यसपटक बिशुद्ध प्रेमकथामा आधारित व्यबसायिक चलचित्र निर्माण गरेको बताईन्। जानी नजानीलाई बसन्त अधिकारीले निर्देशन गरेका हुन्। यो फिल्ममा आफुहरुले कर्पोरेट स्तरको प्रेमलाई उठान गरेको र फिल्म क्षेत्रमा काम गरेको करिब दुई दशक लामो अनुभव यसमा उतारेको पनि निर्देशक अधिकारीले बताए।
चलचित्र जानी नजानीमा मनिष श्रेष्ठ, निरिशा बस्नेत, सन्नी सिंह, नम्रता श्रेष्ठ, प्रकाश अधिकारी, कृष्ण भक्त महर्जन, रोशनी केसीसहितका कलाकारको मुख्य भूमिका रहेको छ। चलचित्रको गीत र ट्रेलर दर्शकले मन पराएका छन्। रोशनी इन्टरटेन्मेनटको ब्यानरमा निर्मित यो फिल्मका निर्माता मोदनाथ खनाल र सागर काजी माली हुन्।
सामिप्यराज तिमिल्सिनाले लेखेको यो फिल्मलाई संजय लामाले छायाँकन गरेका हुन्। अर्जुन जिसीको सम्पादन रहेको जानी नजानीमा अर्जुन पोखरेलको संगीत रहेको छ। अभिनेता मनिष श्रेष्ठले बिगतका सिनेमा भन्दा आफुले जानी नजानीमा फरक र राम्रो काम गरेको बताएका छन्। भारतीय टेली चलचित्र चन्द्र नन्दिनीकी नायिका निरिषाको यो डेब्यु फिल्म हो।
भारतमा काम गरिरहेकी निरिषाले जानी नजानीको भूमिका निकै सशक्त र टिम राम्रो भएकाले आफुले यसमा काम गरेको बताएकी छिन्।